Shir Aayaha Kooxda Shabaabka oo Baydhabo lagu soo Gabagabeeyay | KEYDMEDIA ONLINE
30 November 2020 Ciidanka DF iyo dadka degaanka oo dib ula wareegay Bacaadweyne
Shir Aayaha Kooxda Shabaabka oo Baydhabo lagu soo Gabagabeeyay
Kismaayo (Keydmedia) - Kooxda Shabaabka ee qaybta ka ah Kooxaha dhibaatada dalka iyo dadka Soomaaliyeed u hor seeday ayaa waxaa ay magaalada Baydhaba ee Xarunta Gobbalka Bay ay isugu keentay dad lagu sheegay Culumo'udiin iyo Odayaal dhaqameedyo kuwaasoo sida la sheegay ka kala yimid Gobbalada Koonfurta dalka Soomaaliya.
Waxaana halkaasi lagu qabtay Shir weyne la sheegay in looga arinsanayay aayaha kooxda Shabaabka.Hor joogayaal ka tirsan Kooxda Shabaabka ayaa kulankaasi ka soo qayb gashay kuwaasoo ay kamid yihiin Sheekh Muqtaar Roobow Alimansuur, Sheekh Cali Maxamuud Raage, iyo Wadaadka Siyaasadiisa ay isku dhexyaacday ee Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo hor joogayal kale oo kooxda Shabaabka ka tirsan.
Shirkaan oo socday maalmo kooban ayaa gaba gabadii shirkaasi waxaa laga soo saaray qodobo ay kamid yihiin, in Kooxda Shabaabka laga badalo magaca ay hada wadato oo loo bado Magaca ah Imaarada Islaamiga ah ee Soomaaliya kaasoo dad badan oo Soomaali ahi ay aad ula yaabeen.
Si kastaba xaalku ha ahaadee dadka Soomaaliyeed ee dalka ku nool iyo dibadiisuba waxaa ay aad u dhibsadeen magacyada kooxaha faraha badan ee aan wax horu mar ah u haynin dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Ciidanka DF iyo dadka degaanka oo dib ula wareegay Bacaadweyne
Warar 30 November 2020 13:53
Degaanka waxuu ahaa mid mudo dheer ah ka dhacayaan weeraro ay Al-Shabaab kusoo qaadeysay mudo sanado ah.